We Fight We Win. -- " More than Media ": ABSDF တပ်ရင်း ၁၀၂ ဒီမိုကရေစီ သူရဲ ကောင်းများ မှတ်တမ်း (သို့) တပ်ရင်း ၁၀၂ သမိုင်း
ABSDF တပ်ရင်း ၁၀၂ ဒီမိုကရေစီ သူရဲ ကောင်းများ မှတ်တမ်း (သို့) တပ်ရင်း ၁၀၂ သမိုင်း
တပ်ရင်း ၁၀၂ သမိုင်း
ABSDF တပ်ရင်း ၁၀၂ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ရဲဘော်ဟောင်းများ၏ သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်းများကို တပ်ရင်း ၁၀၂ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကိုမြတ်စိုး နှင့် ဒေါက်တာ အေးမင်းမှ ပြန်လည်ပြုစုရေးသားနေပါသည်။ တပ်ရင်း ၁၀၂ ရဲဘော်ဟောင်းများအနေဖြင့် မိမိတို့တွင်ရှိ သော ဓာတ်ပုံများကို မှတ်တမ်းတင်ထား ရှိနိုင်ရေးအတွက် ကျနော်တို့ကို အီးမေးကနေတဆင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အီမေး နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ကျနော်တို့ ဘလောက်ဂ်မှာဖော်ပြထားပါသည်။
ဒဏ္ဍာရီ မဟုတ်ခဲ့တဲ့ တပ်ရင်း ၁၀၂ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းများရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေပါ။
Killed in action/died from other cause (ABSDF 102 camp)
တိုက်ပွဲတွင်ကျဆုံးသူ များ နှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးသူများ
1. Saya Shwe Ba ( ဆရာရွှေဘ)
2. Tin Tun (ကိုတင်ထွန်း)
3. Ko Toe (ကိုတိုး)
4. Nyan Lin Aung (ကိုဥာဏ်လင်းအောင်)
5. Myo Myint Naing (aka) Ko Paing ( ကိုမျိုးမြင့်နိုင် (ခေါ်) ကျားသစ်ကိုပိန်)
6. Khin Soe (ကိုခင်စိုး)
7. Ko Ko Oo ( ရေး-ကိုကိုဦး)
8. Than Bo( ကိုသန်းဘို) -မောင်မောင်ကြီး ညီ
9. Kyaw Soe Lay( ကိုကျော်စိုးလေး)
10.Kyaw Myint ( ကိုကျော်မြင့်)
11. Ye Soe Aung ( ကိုရဲစိုးအောင်)
12. Thet Oo( ကိုသက်ဦး)
13. Thet Win( ကိုသက်ဝင်း)
14. Ko Win ( ကိုဝင်း)
15. Soe Lin ( ကိုစိုးလင်း)
16. Zaw Min Htin (Sin Pauk) ( ကိုဇော်မင်းထင် (ခေါ်) ဆင်ပေါက်)
17. Myo Than Htun (Super) (ကိုမျိုးသန်းထွန်း)
18. Tin Hla (died at Three Pagoda Pass in 1989) (ကိုတင်လှ)
19. Aung Naing Oo(Ka Yin Ma) (ကိုအောင်နိုင်ဦး (ခေါ်) ကရင်မ
20. Nyan Win (ကိုဥာဏ်ဝင်း)
(Ma Ye Ye Htun was also part of our group before 102 was officially formed. She died at Kwai River Christian Hospital) ( မရီရီထွန်း)
21. U Tin Hla ( ဦး တင်လှ)
22. Aung Ko (ကို အောင်ကို)
23. Shu Kyi ( ကို ရှု့ကြည်)
24. Shwe Thwe (ကို ရွှေသွေး)
25. Maung Maung Gyi (ကို မောင်မောင်ကြီး)
Wounded (တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာရသူများ)
1. Ba Saw Tun (ကိုဘစောထွန်း)
2. Aye Min (ကိုအေးမင်း)
3. Wai Moe ( ကိုဝေမိုး)
4. Myint Aung (ကိုမြင့်အောင်)
5. Zaw Htoo ( ကိုဇော်ထူး)
6. Soe Naing (Kalarlay)( ကိုစိုးနိုင် (ခေါ်) ကုလားလေး
7. Myat Soe ( ကိုမြတ်စိုး ကြီး)
8. Win Htay Oo( ကိုဝင်းဌေးဦး)
9. Khaing Soe ( ကိုခိုင်စိုး)
10. Hla Aung ( ကိုလှအောင်)
11. Kyaw Thet ( ကိုကျော်သက်)
12. Myo Than Htun aka Super (later died) ( မျိုးသန်းထွန်း (ခေါ်) စူပါ
13. Zaw Myo (Chet Kye) (ကိုဇော်မျိုး)
14. Myint Zaw (ကိုမြင့်ဇော်)
15. Toe Win ( ကိုတိုးဝင်း)
16. Aung Naing Oo(Ka Yin Ma-later died) ( ကိုအောင်နိုင်ဦး (ခေါ်) ကရင်မ)
17. Nyan Win (later died) ( ကိုဥာဏ်ဝင်း)
အာယုတောင် နှင့် ရေး တိုက် ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားသော တပ်ရင်း ၁၀၂ အာဇာနည်ရဲဘော် တချို့ ပုံ ( ၁၉၈၉)
All Burma Students Democratic Front www.absdf8888.org/380/
Casualties from 1998 to 2008
Died in action 352
Died from various causes (mainly malaria) 258
ကိုမြတ်စိုး - ကျနော့မှာရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့မှတ်တမ်းတချို့ကို ကိုအေးမင်း ၊ ကိုသီရိ ၊ ကိုဘစောတို့ ဆီ ကော်ပီ ပို့ ထားပြီးသား ။ လိုအပ်လျှင် ပြောပါ။ တိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ နဲ့မှတ်မိသလောက်တော့ စာ စ ရေးနေတယ် ။
သေသွားတဲ့ အထဲ ခင်ဗျားမပါသွားတာ ၀မ်းနည်းတယ်ဗျာ။
bad organization with bad management and bad leadership tends to bad history
27 April 2013 at 05:36
Stupid and follish group with burtual leaders.